DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA NVIDIA GEFORCE 9800 GT - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ma wụnye onye ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo GeForce 9800 GT
Ọtụtụ mgbe, ọbá akwụkwọ nke onye na-egwu egwú yiri ezigbo nkwụsị. N'agbanyeghi ima ihe egwu, obughi onye obula no njikere itinye oge buru ibu n'igharita akwukwo ogugu. Mana n'oge na-abịa, oge na-abịa mgbe onye ọrụ ahụ kpebiri iweghachi iwu n'ebe ahụ. Na iwu na ebe a na-amalite site na mkpado ziri ezi. Nhọrọ ziri ezi bụ iji usoro free n'efu Mp3tag.
Mp3tag bụ ngwa ngwa ntanetị n'efu maka edezi akara egwu egwu egwu. N'adịghị ka aha ya, ọ na-akwado ọ bụghị naanị MP3, kamakwa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile ọdịyo. Na mgbakwunye na njirimara ndị nwere isi ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ga-amasị eziokwu ahụ bụ na ọ chọrọ ịmepụta ọbá akwụkwọ ọdịyo zuru oke.
Full Tag Editor
A na-edezi metadata nke egwu ọ bụla dị ka ịchọrọ. Onye editọ na-enye gị ohere ịkọwa:
Ọnụ ọgụgụ nke abụ na album;
Ebe ohuru (ya bu igaghari egwu);
A ga-eme nke a site na ịhọrọ akara ahụ achọrọ, idezi data na akụkụ aka ekpe nke windo na ịchekwa mgbanwe ndị ahụ. Ịnwere ike ịgbakwunye, gbanwee ma hichapụ mkpado onye ọ bụla n'enweghị ihe mgbochi.
Ntughari faịlụ nfe
Mgbe ị gbakwunyela ọtụtụ faịlụ na ndepụta dị ka tebụl, ịnwere ike ịnweta data gbasara abụ ọ bụla, dị ka codec, bitrate, genre, usoro (na usoro ihe a na-akpọ "mkpado"), ụzọ, wdg. Na mkpokọta, enwere 23 ogidi.
Edere ha niile n'ụdị ogidi. Site na nhọrọ ịhọrọ ị nwere ike idozi egwu na listi. Ya mere, ọ ga-adị mfe nhazigharị, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ edegharị ọtụtụ abụ na oge. Site n'ụzọ, ị nwere ike idezi ihe ndekọ dị iche iche n'otu oge site n'igosipụta onye ọ bụla n'ime ha site na ctrl + pịa nke bọtịnụ òké aka ekpe. N'okwu a, igbe idezi ga-ele ihe dị ka nke a:
Enwere ike ịbịakọta ogidi niile, yana gbanyụọ ngosipụta nke ogige ndị na-enweghị isi site na "Lee" > "Hazie ndị ọkà okwu".
N'ịnọ n'ihu nnukwu ọbá akwụkwọ, ọ bụghị onye ọ bụla chọrọ iji aka faịlụ ọ bụla tinker. Ihe omumu a nwere ike igbapu ngwa ngwa ma mee ka eziokwu ahu buru na onye ozo ga agbanye kpamkpam edezi ihe na-abughi "mgbe ozo n'abali." Ya mere, usoro ihe omume ahụ nwere ike ịmepụta faịlụ dị ukwuu, nke na-enye ohere maka sekọnd ole na ole iji tọghata ọnụ ọgụgụ ndị achọrọ.
A na-eme mgbanwe site na iji ndị nwere ebe dịka % album%, % ihe nkiri% wdg. Ịnwere ike ịgbakwunye ozi dị gị mkpa, dịka ọmụmaatụ, codec ma ọ bụ bitrate, ihe Njirimara nke faịlụ, na ihe ndị ọzọ. Enwere ike ịhazi nke a site na menu. "Ngbanwe".
Okwu mgbe nile
Ngalaba nhọrọ "Omume" na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na-akpọ mgbe niile. Ha na - eme ka ọ dị mfe ịdee mkpado ma a bịa n'ịgbanwe ụda egwu egwu. Site n'enyemaka ha, ọ ga-ekwe omume na otu igodo iji tọọ egwu dịka ederede a kapịrị ọnụ.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ọtụtụ songs ndị aha ha dere na obere akwụkwọ ozi. Ịhọrọ "Omume" > "Ntụgharia akụkọ", okwu niile nke songs a họpụtara ahọpụta ga-edepụta ya na mkpụrụ akwụkwọ isi obodo. Ị nwekwara ike ịmepụta ụfọdụ omume, dịka ọmụmaatụ, na-agbanwe mgbe niile "dj" na "DJ", "Feat" to "feat", "_" na "" (ya bụ, ịkọwa n'etiti okwu na ohere).
Iji "Omume", ị nwere ike iji ezi uche gị gbanwee ede nke egwu niile dịka ị chọrọ. Nke a bụ ihe dị ezigbo mkpa na nke bara uru maka ndị na-achọ ịkọwa aha egwu.
Download mkpado site na Ịntanetị
Ọrụ ọzọ bara uru ma dị mkpa nke na-adịghị n'ime ihe omume ọ bụla-nchịkọta akụkọ bụ mbubata metadata site na ọrụ ịntanetị. Mp3tag na-akwado Amazon, discogs, freedb, MusicBrainz - ihe kachasị n'ịntanetị na ndị na-ese ihe na albums ha.
Usoro a dị mma maka egwu na-enweghị utu aha na-enye gị ohere iwepụ oge na ntinye akwụkwọ ederede. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-enweta data sitere na freeb (nchekwa data nchekwa CD). Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ n'otu oge: site na diski ịtinye n'ime CD / DVD, site na nkọwa nke faịlụ ahọrọ, site na ntinye ihe nchọpụta data na site na nsonaazụ ọchụchọ na Ịntanetị. Nhọrọ ọzọ na ọrụ a bụ ihe ndị ọzọ dị n'elu.
Achịcha ga-ewepu mkpa ịchọọ maka mkpuchi, wepụ oge nke abụ na ozi ndị ọzọ na-adịghị na mpaghara niile nke ebe obibi akwụkwọ nke onye ọrụ.
Ngwa dị mfe na dị mfe;
Full translation na Russian;
Ngwá ọrụ nchịkọta mkpado bara ụba;
Nkwado Unicode zuru ezu;
Enweta ọrụ mbupu metadata na HTML, RTF, CSV;
Ikike idezi ọtụtụ songs ọ bụla n'otu oge ahụ;
Nkwado maka usoro mgbasa ozi kachasị mma;
Na-arụ ọrụ na listi ọkpụkpọ;
Ịbịnye mkpuchi na ihe ndị ọzọ metadata;
Enweghị onye ọkpụkpọ;
Iji rụọ ọrụ na ngwa ahụ n'ụzọ zuru oke, a ga-achọ nkà ụfọdụ.
Mp3tag bụ usoro mmezi nke metadata ukwu nke ukwuu. Ọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ọkpụkpọ ọ bụla dị iche na batches. Nnukwu ikike edezi na ikike iji kwanye mkpado na njikwa zuru ezu nke na-ejuputa ubi - naanị n'ihi nke a ị nwere ike itinye nnukwu gbakwunyere. Na nkenke, ndị niile na-achọ ịme ka ha nwee ike ịkụziri ha ụlọ ọrụ ọbá akwụkwọ na ihe ngosi nke perfectism ga-achọta ya ka mma ịchọta usoro ihe omume.
Download Mp3tag maka n'efu
Na-edezi faịlụ Mp3 na-eji ederede faịlụ Gbanwee mkpado MP3 Mixxx PDF Onye Okike
Mp3tag bụ onye nchịkọta akụkọ nchịkọta dị mfe ma dị mfe maka faịlụ ọdịyo na-akwado usoro niile a ma ama ma nwee ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Onye Mmepụta: Florian Heidenreich